Tuesday January 25, 2022 - 21:29:18 in Wararka by Xarunta Dhexe
Srikanth Bolla waxa uu isu diyaarinayaa filim ay ka sameyneyso shirkadda Bollywood-ka, kaasoo ku saabsan noloshiisa.
Ninkan dhallinyarada ah ayaa maamule ka ah shirkad uu dhisay oo qiimaheeda uu ku kacayo £48 milyan oo gini oo u dhiganta ku dhawaad $650 milyan oo doolar - balse arrintaas ayaa ku dhawaatay ina aysan suurtagalin.
Isagoo dhowr iyo toban jir ah, ayaa Srikanth loo sheegay inay sharci darro tahay inuu dugsiga sare ka barto xisaabta iyo seyniska maadaama uu indhaha naafo ka yahay, sidaas darteedna waxa uu dacwad maxkamadeed ka gudbiyay dowladda gobolka, si waxbarashadiisa loogu oggolaado, sida ay kusoo warrantay weriyaha BBC, Arundhati Nath.
Muddo siddeed sano ah ayuu maalin kasta Srikanth Bolla oo lix jir ah u lugeynayay iskuul dhowr kiiloo mitir u jira oo ku yaalla baadiyada Hindiya, waxaana hagi jiray walaalkiis iyo arday kale oo ay isku fasal ahaayeen.
Waddada waxa ay ahayd mid dhiiqo badan, oo ay daadad mari jireen marka ay fatahaadaha dhacaan. Ma ahayd waqti farxad leh.
"Ma jirin qof ila hadlay, maadaama aan ahaa cunug indhaha naafo ka ah," ayuu yiri.
Waxaa dhalay waalidiin sabool ahaa oo aan waxba baranin, sidaas awgeedna waxaa lagu faquuqay bulshada dhexdeeda.
"Waalidiinteyda waxaa loo sheegay in aanan xitaa waardiye u noqon karin gurigeyga mar haddii aanan arkin karin haddii uu eg kasoo galo albaabka.
"Dad badan ayaa waalidkeyga u imaan jiray iyagoo ka dalbanaya in ay igu dilaan barkin sanka iyo afka la iga saaro," ayuu yiri ninka hadda 31 jirka ah.
Waxaa oo dhan way iska dhaga tireen waalidiintiisa, waxayna siin jireen taageero buuxda, markii uu siddeed sano gaarayna, Srikanth aabihiis ayaa u sheegay inuu u hayo war xiiso badan.
Srikanth waxaa boos looga helay iskuul xannaano ah oo acrruurta indhaha naafada ka ah wax lagu baro, sidaas awgeedna qoyska waxay u guureen magaalada ugu dhaweyd ee lagu magacaabo Hyderabad, taasoo meesha ay dagganaayeen u jirtay qiyaastii 249 miles (400km).
Xilligaas, magaaladan waxa ay ka tirsaneyd gobolka Andhra Pradesh.
Inkastoo uu aad uga fogaanayay waalidiintiisa, Srikanth aad buu u xiiseeyay iskuulka, si deg deg ah ayuuna u sal dhigtay.
Waxa uu bartay sida loo dabaasho, sida loo ciyaaro chess-ka iyo waliba kubadda cricket-ka, taasoo uu ku ciyaarayay kubadda shanqar sameyneysa si uu u fahmo meesha ay mareyso.
"Wax walba waxay ku xiran yihiin gacmaha iyo dhagaha," ayuu yiri.
Srikanth wuu ku faraxsanaa inuu sameeyo waxyaabaha hiwaayaddiisa ah, balse waxa uu sidoo kale ka fikiri jiray sida uu mustaqbalkiisa noqon karo.
Mar walba waxa uu ku riyoon jiray inuu noqdo ingineer, waxa uuna ogaa inay taas ku baahan tahay barashada seyniska iyo xisaabta.
Markii la gaadhay waqtiga, waxa uu xushay maaddooyinkaas muhiimka ah, balse iskuulkiisa ayaa ku dhahay "maya", waxaana lagu wargeliyay inay tahay sharci darro.
Iskuullada Hindiya waxaa maamula ururro kala duwan, mid walbana waxa uu leeyahay sharci u gaar ah. Qaarkood waxay hoos tagaan maamul goboleedka ama dowladda dhexe, qaarna si gaar ah ayaa loo leeyahay.
Iskuulka Srikanth waxaa gacanta ku hayay guddiga maamul goboleedka Andhra Pradesh, sharcigiisuna waxa uu ahaa in aan carruurta indhaha naafada ka ah la barin xisaabta iyo seyniska, maadaama lagu barto waxyaabo adag oo ay ka mid yihiin kuwo la sawirayo.
Waxaa loo oggolaa inay taas baddalkeeda bartaan farshaxanka, luuqadaha iyo culuumta bulshada.
Sanadkii 2007-dii ayuu Srikanth galay xaalad walwal ah isagoo caqabad kala kulmay xeerkan oo iskuullada aysan ka wada sinneyn.
Mid ka mid ah macallimiintiisa, oo lagu magacaabo Swarnalatha Takkilapati, ayaa sidoo kale la walbahaaray, waxa uuna ardaygiisa yar ku dhiirrigeliyay inuu tallaabo qaado.
XIGASHADA SAWIRKA,SRIKANTH BOLLA
Srikanth oo isagoo dhowr iyo toban jir ah ka shaqeynaya xarunta tababarka kumbuyuutarrada ee Samanvai oo loogu talogalay carruurta indhaha la
Labadooda oo isla socda ayaa u tagay guddiga maamulka dugsiyada sare ee gobolka Andhra Pradesh si ay ugu gudbiyaan kiiskooda, balse waxaa loo sheegay in aan arrintaas waxba laga qaban karin.
Waxay heleen qareen, iyagoo garab ka helaya kooxda maamulka iskuulkana, waxa ay diiwaan geliyeen kiis loo gudbiyay maxkamadda sare ee Andhra Pradesh, iyagoo ka codsaday in isbaddal lagu sameeyo sharciga waxbarashada, si ardayda indhaha naafada ka ah loogu oggolaado inay bartaan seyniska iyo xisaabta.
"Qareenka ayaa noo dagaallamay," ayuu yiri Srikanth, ardaygu khasab kuma aysan ahayn inuu maxkamadda ku xaadiro.
Intii uu kiiska socday, Srikanth waxaa soo gaaray war ku saabsan inuu jiro iskuul weyn oo magaalada Hyderabad ku yaalla, Chinmaya Vidyalaya, oo ku shaqeynayay sharci ka duwan midkaas, ardayda indhaha la'na siiya maaddooyinka xisaabta iyo seyniska. Iskuulkaas ayaa u yaboohay inay boos u hayaan.
Srikanth isagoo ku faraxsan ayuu iska soo qoray.
Waxa uu markaas noqday ardayga keliya ee indhaha naafada ka ah ee fasalkiisa dhigta. Balse waxa uu yiri: "Waxay igu soo dhaweeyeen gacmo furan".
Lix bilood kaddib waxaa jiray war kasoo baxay maxkamadda - Srikanth ayaa ku guuleystay kiiskii.
Maxkamaddu waxa ay xukuntay in ardayda indhaha naafada ka ah ay baran karaan seyniska iyo xisaabta marka ay gaaraan dugsiga sare ee gobolka Andhra Pradesh.
'Roobda'aya iyo dhir yar oo soo baxeysa'
Srikanth waxa uu durba ku laabtay iskuulkiisii waxa uuna billaabay barashada maadooyinka uu jeclaa ee xisaabta iyo seyniska, isagoo imtixaankana ka keenayay celcelis ahaan 98%.
Qorshihiisu waxa uu ahaa inuu dalbado macadka ugu sarreeya Hindiya ee lagu barto injineeriyada ee la yiraahdo IIT ama (Indian Institutes of Technology).
Hase yeeshee dhammaan laamaha ka tirsan machadkaas way diideen inay qaabilaan Srikanth.
Islamarkiiba wuxuu jaamacado ka dalbaday Mareykanka, waxa uuna fursado ka helay shan jaamacadood oo kala duwan. Ugu dambeyntii wuxuu ku biiray jaamacadda MIT ee ku taalla gobolka Massachusetts, halkaasoo uu ka noqday ardaygii ugu horreeyay ee dibadda ka imaada ee indhoole ah.
Wuxuu gaaray 2009-kii, maalmihiisii ugu horreeyayna wuxuu ku tilmaamay kuwo uu la kulmay "waaya aragnimo isku dhafan".
"Qabowga daran ayaa ahaa waxa ugu horreeya ee lama filaanka igu noqday, lama aanan qabsanin cimilada sidaasoo kale ah. Cuntadana dhadhankeeda iyo carafteeda wuxuu ahaa mid ka duwan sidii aan aqaannay," ayuu yiri.
Balse Srikanth si dhakhso ah ayuu ula qabsaday bii'ada cusub.
Intii uu waxbarashada ku jiray waxa uu dhinaca kale ka billaabay hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo wax loogu qabanayo carruurta la nool naafanimada, si loogu tababaro, waxna loogu baro dhallinyarada Hyderabad. Sidoo kale lacag uu aruuriyay ayuu ku dhisay maktabad.
Noloshu si wanaagsan ayay u socotay. Wuxuu ka qalin jebiyay MIT, isagoo ka qaatay shaqaadada seyniska dhinaca maamulka, shaqooyin badan ayaana loo yaboohay, balse wuxuu go'aansaday in uusan joogin Mareykanka.
Marxaladdii uu Srikanth kusoo maray iskuulka ayaa ku reebtay uur ku taallo, wuxuuna dareensanaa inay jirtay shaqo uusan dhammeystirin oo ku sugeysay waddankiisa.
Dadka naafadaha ah xitaa haddii ay wax bartaan waxay caqabad kala kulmaan inay shaqo helaan.
Nuuriya: Guurkaygii waxaa ninkayga lagula taliyay "ha guursan waa Naafo"
XIGASHADA SAWIRKA,BOLLANT INDUSTRIES
Koox shaqaale indhooleyaal ah oo ka howl gala shirkadda Srikanth
Wuxuu go'aansaday in uu sameeyo xarun uu isaga leeyahay oo laga shaqaaleysiiyo dadka naafada ah.
Srikanth wuxuu ku laabtay Hyderabad sanadkii 2012-kii, wuxuuna aasaasay Shirkadaha Bollant.
Shirkaddiisa oo soo saarta waxyaabo la warshadeeyay oo ka sameysay dhirta ayaa qiimaheeda waxa uu gaarayaa £48 milyan oo gini oo u dhiganta ku dhawaad $650 milyan oo doolar.
Inta uusan billaabanin cudurka safmarka ah, 36% ka mid ah shaqaalaha shirkaddiisa oo gaaraya 500 oo ruux waxay ahaayeen dad naafo ah.
Shirkadda Bollywood ayaa sidoo kale hadda soo raadsatay, waxayna filim ku saabsan noloshiisa billaabeysaa bisha July ee sanadkan.
Intee le'egyahay culeyska amni ee saaran ganacsatada Bakaaraha?